Ahoana ny fomba hanaovana SEO ho an'ny tranonkala vaovao ho an'i Google?
. Araho ireo toro-hevitra avy amin'ny SEO lisitra eto ambany ho laharana ambony ao amin'ny Google.
Three Advanced SEO Tips to Make Google Love Your Site
Provide Users with the Information They Look For
0) Mifantoka amin'ny famoronana votoaty manaitaitra sy mandresy lahatra. Toy izao manaraka izao izany: amin'ny famenoana ny loharano misy votoaty mampahafantatra sy manan-danja, dia manintona kokoa ny fahatsinjovana ianao. Izany, ho setriny, dia mampitombo ny Google rankanao - ego evic mini. Miezaha mamorona votoaty izay haka sy hitazona ny mason'ny mpampiasa. Tadidio fa ny tanjonao voalohany dia ny mamorona votoaty toy izany izay hamadika ny mpitsidika ho mpanjifa.
Tsotra ny tsiambaratelo amin'ny famoronana votoaty manan-tantara: manoratra lahatsoratra sy lahatsoratra bilaogy izay mamaritra mazava tsara sy mazava tsara ny serivisy na vokatra azonao. Manapaha hevitra amin'ny fehezan-teny manan-danja ireo mpampiasa dia mety hitady ny tranokalanao. Ampidino ireo teny fanalahidy ireo ao amin'ny lahatsoratrao manerana ny tranonkala manontolo.
Hevero ny fanorenana fifandraisana
Ny rohy dia ampahany manan-danja amin'ny sehatra SEO mahomby. Manampy ny fitadiavana finday hahitanao ny loharanon-karenao ary hampitombo ny fahitana ny tranonkalanao amin'ny SERPs.
Mety efa fantatrao fa afaka manavaka ny fifandraisana voajanahary avy amin'ireo tsy voajanahary i Google. Tadidio fa ny rohy voajanahary ihany no mahasoa amin'ny fanoratana sy ny fikajiana ny tranokalanao. Arovy fa ny tranonkala hafa mahita ny votoatiny sarobidy ary mieritreritra fa mety hanampy azy ireo izany. Andramo ny tranonkala fanta-daza te-hizara ny votoaty azonao.
Mila mamatsy ny resource ianao. Ataovy izay ahafahan'ny mpitsidika mahazo sy mampiasa ny serivisy omenao ny tranonkala na inona na inona kilemaina. Makà fotoana hananganana tranokala miaraka amin'ny rafitra rohy logika. Ampiasao ny tranonkala handefasana ny tranonkala.
Ny fampiasana tranonkala tokony aloanao
Ankehitriny, andeha isika hiresaka momba ireo zavatra tian'ny tompon'ny orinasa tokony hisoroka rehefa manatsara ny tranokalany vaovao.
Aza duplicate ny votoatiny: Ny pejy rehetra amin'ny tranokalanao dia tokony ho tokana. Aza atao kopia votoaty avy amin'ny tranonkala ivelany na pejy hafa ao amin'ny tranokalanao. Ny votoatiny toy izany dia mety hanimba ny SEO anao.
Aza manamboatra teny fanalahidy: Amin'ny taona 2017, heverina ho teknika mainty hoditra mavesatra ny teny fototra. Raha mamorona tranonkala miaraka amin'ny teny fanalahidy ianao dia haingana na ho ela dia haka anao i Google. Vokatr'izany dia misy ny porofo mivaingana ahafahanao manasazy ny sazy.
Esory ny rohy spammy: maro ireo tranonkala izay mamela ireo webmasters handefa rohy, ny sasany aza dia mametraka ny sehatra misy anao nefa tsy manontany anao. Ireo tranonkala manana fahefana ambany sy sarany avo lenta dia tokony ho voavela. Aza avela hiditra amin'ny toerana rehetra ireo toerana ireo.
Ny fikaikana ny tranonkala Google dia tsy sarotra tahaka ny mety amin'ny voalohany. Amin'izao fotoana izao, misy fitaovana maro ao amin'ny tranonkala izay afaka manampy anao handefa ny votoatiny amin'ny Google ary handinika ny fomba ataonao ao amin'ny Google Search.
Ny fahafantarana ny fomba hahatonga ny Google ho tia ny tranonkalanao dia fanalahidy hanatsarana ny SEO anao. Araho ireo torohevitra voatanisa etsy ambany ary jereo izay mitranga amin'ny lalao SERP.